Isikhathi esining impela esibhekana nazo zonke izinhlobo zezinkinga uma usebenza nge-computer. Abaningi izici zayo efakwe ngokwakhona, futhi ukuze wenze okuthile, siba ukuzishintsha. Kodwa kuncane okuguqula okuthile. Udinga ukwazi ukuthi nalokho ukushintshwa benziwa izilungiselelo ikhompyutha yakho. Ezinye zokukhwabanisa kungase kube nemiphumela engathandeki, kulimaze ukusebenza uhlelo lwakho. Ukuze uvimbele lokhu ukuthi kwenzeke, kutuswa ukuba ufunde ngokucophelela lesi sihloko indlela yokumisa nezimbobo modems ezahlukene.
Omunye esimweni esinjalo, ingabe le nkinga kanjani ukuvula imbobo. Abantu abaningi ababhekene nezimo imidlalo ye-computer ziyazi ukuthi, kufanele ukudala iseva umdlalo kwabanye imidlalo ukudlala ndawonye kwi-inthanethi. Le seva kufanele ukukhonza njengomdala iseva okunye ukudala iseva ku-intanethi. Kuyoba ukusingatha zonke abadlali. Kodwa kanjani ukuze uvule imbobo ngoba iseva umdlalo kuyi-Internet? It kuvela ukuthi akusiwona wonke.
Ngokwesibonelo, cabanga ikhompyutha umdlalo counter strike, futhi kanjani ukuvula iphothi ngoba. Ukuze ukuxhuma kunethiwekhi umphakathi nge-Internet, kuma-computer ukuthi uba iseva umdlalo, kuzomele uvule nezimbobo. Lonke ulwazi kusukela kukhompyutha iklayenti sidlula iseva, ngakho inani elikhulu idatha okokufaka enikeziwe kuso. Njengoba konke lokhu - udinga ukudlala ukuze imodemu okuzenzakalelayo ivaliwe, ayikwazi ukuthola i-traffic ngobulili kusukela amaklayenti. Okufanele ukwenze kuleli cala, nokuthi ukuvula imbobo ngokwabelana? Kuzo zonke lezi zinkinga manje sizozama ukuphendula. Phela, noma iyiphi inkinga idinga indlela ngokucophelela.
Okokuqala udinga ukuthola indlela ukuvula izimbobo 27015, okuyinto edingekayo ukuze lo mdlalo.
Eyodwa yezindlela ngoba kokutholakala counter umdlalo isiteleka noma ezinye izinhlelo zokusebenza zihlanganisa lezi ezilandelayo:
Isinyathelo sokuqala ukuya "Qala" imenyu iphaneli kwekhompyutha yakho.
Iya control panel ngokukhetha kwaso ohlwini.
Okulandelayo, beka "firewall" isithonjana bese ufaka ngokuthinta ke.
Ukuvumelana nomlayezo, kufanele uye kuthebhu "Okuhlukile"
Ukuthola ithebhu «UDP», kufanele ufake lokumaka eduze kwayo.
Bhala noma yiliphi igama ukuze uzikhombe ke.
27015 ukubhalisa ngaphandle amamaki ikhotheshini bese ugcine.
Manje kubalulekile ukuzama ukudala iseva umdlalo, futhi uma konke kwenzakala okuhle, wena-ke kahle kulandela zonke izinyathelo.
Le ndlela ku okutholwe abacwaningi kungase kusetshenziswe ukusiza ukuxazulula inkinga.
Indlela yokuvula itheku elisogwini imodemu?
Zonke izilungiselelo kuwo wonke modems cishe ezifanayo. Into esemqoka kufanele sikhumbule ukuthi avulekele zonke ngokusebenzisa firewall. Ngalo ungathola yonke imininingwane eye-, kokuthi kubhaliswe nekheli layo IP lapho. eyenziwe yonke leyo ndlela echazwe ngenhla kulezi izilungiselelo.
Akumele neze sikhohlwe ukuthi lezi zenzo kunganciphisa ukuphepha kwe-computer yakho. Hhayi lutho ngokwakhona, zonke izimbobo zivalwe bese uvula Kwakudingeka nje uthemba izinhlelo.
Uma uvula nezimbobo ku imodemu yakho, kufanele linqume ngokucophelela entsha futhi ushintshe kuzo. Uma ngephutha susa noma ukuvala izimbobo ezidingekayo, ungase uzizwe nezinkinga nge-inthanethi noma ezinye izinhlelo zokusebenza ukuthi uthole kubo ngokusebenzisa ulwazi kusuka ku-intanethi. Njengoba inketho, kufanele babhale phansi ephepheni zonke izinguquko ozenzile e inqubo esikhundleni noma wengeza omusha, ukuze kuragelwe phambili ne kwakunokwenzeka ukubona ukuthi izinto zazinjani ekuqaleni. Ngemuva kokwenza izilungiselelo ayilungile ingalela, isibonelo, i-Internet kusiphequluli sakho futhi ubone ukuthi izinto emuva, ngeke uphumelele. Ngakho-ke, uma ungeyena uyaqiniseka amakhono abo, kungcono umeme abangane ukukusiza usethe konke ngendlela efanele.
Indlela ukwandisa ifonti kombhalo